bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Constantine: The House of Mystery – Gold Channel Movies
Enteraworld where magic can't save you.May. 02, 202227 Min.
Constantine:The House of Mystery(2022)
DC Comics ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစံသိန်းရဲ့ Animated Movie အသစ် ထွက်ရှိလာပါတယ်။
2005 တုန်းကလည်း မင်းသားကြီး Keanu Reeves သရုပ်ဆောင်တဲ့ Constantine ဇာတ်ကားထွက်ခဲ့သေးတော့ ဒီဇာတ်ကောင်ကို တော်တော်များများ ရင်းနှီးကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောရရင် Apocalypse War အပြီးမှာ ကမ္ဘာသားတိုဟာ စစ်နိုင်လိုက်ပေမယ့် ‌တန်ကြေးကတော့ အများကြီးပေးဆပ်လိုက်ရပါတယ်။လူတိုင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေကို ဆုံးရှုးခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ Constantine က Flash ရဲ့အကူအညီနဲ့ အချိန်ကိုပြန်ပြင်ပြီး အစကတည်းက Apocalypse War ဆိုတာ မရှိခဲ့အောင် လုပ်ဖိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Constantine တစ်ယောက် House of Mystery လိုခေါ်တဲ့ ပဟေဠိဆန်ဆန်အိမ်ကြီးမှာ အဆုံးမရှိအကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်။Constantine တစ်ယောက် ဒီအိမ်ကြီးထဲရောက်လာတဲ့အခါ သူဘာကြောင့်အပြစ်‌ချခံခဲ့ရတာလဲ။ဒီအိမ်ကြီးကရော ဘာလဲ။ဒီကနေ ဘယ်လိုလွှတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Download Megaup SD 480p Myanmar 95 MB
Download Mega SD 480p Myanmar 95 MB
Download G Drive SD 480p Myanmar 95 MB
Download Megaup HD 720p Myanmar 228 MB
Download Mega HD 720p Myanmar 228 MB
Download G Drive HD 720p Myanmar 228 MB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 802 MB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 802 MB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 802 MB